Ndị njem njem India na ndị njem nlegharị anya Nepal Jikọọ aka ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Ndị njem njem India na ndị njem nlegharị anya Nepal Jikọọ aka ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ gbasara Nepal • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
India na Nepal jikọrọ aka
Ndị otu ndị njem na-eme njem na India (TAAI) bịanyere aka na Memorandum of Understateing (MOU) na Ọktoba 22, 2021, ya na ndị ọrụ njem nlegharị anya Nepal iji kwalite ma kwalite njem nlegharị anya nke abụọ.
MOU na-elekwasị anya n'ịkwalite ọdịmma otu na ndị bịara njem nlegharị anya site na imekọ ihe ọnụ na ụzọ nkwado n'otu n'otu.
Jyoti Mayal, Onye isi ala, TAAI, kwuru na ha na-elekwasị anya n'ịkwalite ngwaahịa njem nlegharị anya nke gụnyere enyemaka nke abụọ n'ịkwalite njem nlegharị anya.
A ga-eme nke a site na mmemme, ihe ngosi okporo ụzọ, conclaves, summits, webinars, wdg, iji gosi ikike njem nlegharị anya nke mba abụọ ahụ.
Jyoti Mayal kwuputara ma kwuputa na India na Nepal kekọrịta oke na, yabụ, mba abụọ a kwesịrị ịmalite njem nlegharị anya karịa, ọkachasị mgbe ọrịa ahụ gasịrị. Ha abụọ chọrọ ka ha bụrụ ndị ọzọ atụmatụ na ịnakwere n'ụzọ ọhụrụ ụkpụrụ na ahịa atụmatụ. Njem nlegharị anya na mba abụọ ahụ nwere ike ịhụ uto dị ịrịba ama ma nwee ike bụrụ ahịa ahịa mbụ.
Anoop Kanuga, onye otu kọmitii njikwa, TAAI, kwuputara ekele ya ma kelee Dr. Dhananjay Regmi, CEO, Nepal Tourism Board (NTB), na ndị otu ya niile maka nkwado na nkwado nke enyere TAAI. O kwuputara mmekọrịta ochie nke India na Nepal na ka TAAI si nye aka n'ịkwalite ciment na iwusi otu ihe ahụ ike site n'ịkwado njem na ahia n'etiti mba abụọ ahụ.
Enwere ike itinye mmemme ndị akọwapụtara n'okpuru MOU a, akụkụ abụọ ahụ dabere na mkparịta ụka na ntụle ga-ewepụta usoro iji kwalite ma kwalite njem nlegharị anya nke abụọ, Jay Bhatia, osote onye isi ala kwuru.
Bettaiah Lokesh, onye odeakwụkwọ ukwu na-asọpụrụ, kwusiri ike mkpa ọ dị ikwado akwụkwọ ịkpọ òkù maka mmemme kwa afọ nke ibe ya gụnyere ọgbakọ, marts njem, na mmemme mgbasa ozi mba na mpaghara ndị ọzọ, ma kelee NTB maka ikwenye itinye aro ahụ na MOU.
Mgbanwe ozi, nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mmepe nke njem nlegharị anya na-emepụta atụmatụ gbasara mmepe akụrụngwa, nyocha na data ndị ọzọ, wdg, bụ n'ezie isi ihe pụrụ iche agbakwunyere na MOU kwuru Shreeram Patel, Onye na-echekwa ego.